Qaama Namaa Keessaa yeroo Rafan Illee Hojiin Isaa Kan Suuta Hin Jenne Isa Kam?
Kamisa, Guraandhalaa 11, 2016 Local time: 11:38
Hirribi boqonnaa qaamaa fi sammuu yoo ta’u yeroo rafan waan naannoo ofiitti ta’a jiru
hordofuun rakkisaa ta’a.
Yeroo hirriiba rafan sochiin qaama namaa, hoo’i qaamaa, dhibbaan dhigaa afuura baafannaa fi kanneen biroon suuta jedhu.
Garu sammuun namaa yeroo rafan illee hojii isaa itti fufa. Waan suutaan hojjatu hin qabu.
Yeroo itti rafan dhaabbattaa gochuun eeguu, waan nama daddamaqsan kan akka Bunaa fi kanneen biroo dhuguu dhiisuu, sagalee naannoo ofii jiran gad xiqqeessuun hirriiba gaarii rafuuf kanneen gargaaran keessaa hanga tokko.
Guyyaatti sa’atii 6 hanga 8 rafuun barbaachisaa dha jedhu ogeessonni.
Gaaffii fi Deebii gaggeeffame kutaa 1ffaa caqasaa
Gaaffii fi Deebii gaggeeffame kutaa 1ffaa caqasaai